FAMORONANA RÔBÔT: Misongadina ny tanora malagasy – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:58
Mahavita zavatra ny tanora malagasy.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FAMORONANA RÔBÔT: Misongadina ny tanora malagasy
Mamiratra ny toerana misy ny ekipa nasionaly malagasy amin’ny “First Global Challenge”, ilay « Lalao Olympikan’ny robotika sy ilay atao hoe STEM » (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ho an’ny tanora 14-18 taona manerantany. Fifaninanana izay manome lanja ny asa fikarohan’ny tanora ny fisainana siantifika. Tsy latsa-danja amin’izany ny tanora malagasy. Hatreto, tafiditra ao anatin’ny dimy voalohany ny toerana misy an’i Madagasikara.
Lucien R. 4 septembre 2020
Azo ampiasaina ao an-tokantrano na any amin’ny toeram-pitsaboana ity “Rôbôt” ity.
Rafaliniaina Radolaza Léondaris, Ralamboharisoa Zo-Hary, Randrianjatovo Tahiry Manantsiory, Ambinintsoa Cynthia, ary Razafindrakoto Finoana Tiantsoa. Izy dimy mianadahy ireo indray no mandrafitra ny ekipa nasionaly malagasy amin’ny“First Global Challenge” amin’ity taona ity. Fifaninanana izay miompana amin’ny fampisehoana fahaiza-manao amin’ny famoronana “Robot”, ka tanora siantifika eo anelanelan’ny 14 ka hatramin’ny 18 taona no mandray anjara amin’izany. Niavaka kely ny fifaninanana tamin’ity 2020 ity noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19. Izany indrindra no hahatonga ireto tanora malagasy ireto hanompana bebe kokoa ny asa famoronana ho amin’ny “Rôbôt” afaka manampy ao an-tokantrano, amin’ny fanaterana sakafo na fanafody, mba hanenana ny mety fifampikasohana eo amin’ny samy olona.
“Nanao kisary tamin’ny taratasy aloha izahay tamin’ny voalohany, nahafaha-nijery ny endrika tiana hanaovana ilay izy. Avy eo nanangona ny fitaovana sy akora rehetra nahafahana nanangana ilay Rôbôt. Tsy maintsy nojerena tsara hoe mety hahazaka zavatra ve ilay akora ampiasaina sa tsia ? Taorian’izay vao natomboka ny fanambarana sy fandrafetana azy rehetra, isan’izany ny maotera …”, ampahany tamin’ny fanazavan-dRafaliniaina Radolaza Léondaris io.
Izy izay anisany mikambana ao anaty ny ekipa nasionaly. Amin’ny ankapobeny, dingana maromaro no narahin’ny ekipa vao tena tontosa tamin’ny antsakany sy andavany ny fananganana ny “Rôbôt”. Tafiditra ao anatin’izany, ohatra, ny fanaovana “Programmation”, aorian’izay vao miditra amin’ny fanaovana ny andrana sy ny fanatsarana. Marihina fa afaka mandeha irery na « mode automatique » ity voka-pikarohana ity, ary azo tantanina koa na “mode commandé”.
Ny mombamomba ireo mandrafitra ny ekipa nasionaly:
Zo-Hary Ralamboharisoa no anarako, avy any Antsirabe aho, ary handray 18 taona amin’ny 10 aogositra. Nianatra tao amin’ny sekoly Masindahy Josefa Antsirabe aho, ary afaka bakalorea sokajy C teo izay nahazoako ny « mention bien ». Hanohy ny fianarako any amin’ny « Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo » aho, izay hanaovako « Génie des Sciences Techniques et Industrielles ». Izaho dia anisan’ireo ankizy mahay any am-pianarana (voalohany foana tany amin’ny lycée), ary tena haiko ny taranja Physique-Chimie sy Mathématiques, fa tsy ataoko ambanin-javatra anefa ny taranja literera; ka tiako tokoa ny mizara ny fahaizako amin’ireo mpiara-mianatra amiko. Mpijery horonantsary aho, indrindra fa ny « science-fiction », izay nampahafantatra ahy ny halebiazan’ny siansa sy ny zava-bita avy aminy, indrindra fa ny « robots »; tia mijery documentaire koa anefa aho.
Razafindrakoto Finoana Tiantsoa Fenohasina
Razafindrakoto Finoana Tiantsoa Fenohasina no anarako, fa antsoina amin ’ny anarana hoe Tiantsoa. Teraka tamin’ny 14 aprily 2003 ary izaho dia 17 taona. Izaho dia avy any Antsirabe ary mipetraka any Antsirabe. Mianatra ao amin’ny Lycée Privé Saint Joseph Antsirabe, kilasy voalohany (première S) .Izaho dia tia sy nandalina izay rehetra momba ny siansa hatramin’ny fahakely ary niditra tao amin’ny tontolon’ny robotika tamin’ny kilasy fahadimy (cinquième).Izaho koa anefa tia mamaky boky sy mijery horonan-tsary fanadihadiana. Ny fahalalako ny tontolon’ny ARDUINO no nanova ny fomba fijeriko sy afaka namaritako ny asako rahatrizay .Izaho dia mijery hatrany ny lafin-tsarany amin’ny zavatra rehetra ataoko ary tia mandalina zava-baovao koa .Ho ahy, ny fandraisana anjara amin’ny “FIRST GLOBAL CHALLENGE” dia nofinofy ary fantako fa mila fandraisana andraikitra sy asa maro ilay fifaninanana…
Ambinintsoa Cynthia no anarako, mipetraka any Ivato ary 18 taona. Vao afaka bacc tamin’ny taranja siantifika farany teo aho, ary tafiditra soa aman-tsara ao amin’ny sampam-pampianarana Fizika ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Tiako ny manao fikarohana momba ny astronomia ary na ny mijery ny kintana sy ny volana eny amin’ny lanitra aza dia lasa fahafinaretana sy fialam-boliko. Ankoatra izany, dia anisan’ny fialam-boliko koa ny mihira, ny manamboatra zavatra simba, ny mamaky boky ary ny mitendry gitara. Ny manosika ahy hanao ny FGC 2020 dia, voalohany indrindra, mba hampisehoana ny tanora malagasy indrindra ireo siantifika fa miankina amintsika ny fandrosoan’ny tanintsika. Manaraka izay, ny tanjona dia hanehoana maneran-tany fa ny vahoaka malagasy dia mahavita mamorona sy mamiratra ihany koa na dia ambany be ary ny laharana misy antsika eo anivon’ny toekarena sy ny fahaizana…
Rafaliniaina Radolaza Léondaris Valisoa
Rafaliniaina Radolaza Léondaris Valisoa dia Mpianatra taona faharoa amin’ny Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA)
Sampana Fifandraisan-davitra. Niatrika ny fifaninanam-pirenena fidirana eny amin’ny “Ecole Polytechnique d’Antananarivo (ESPA)” sampana fifandraisan-davitra izy tamin’ny taona 2019. Voarain’ny ESPA anisan’ireo telopolo mendrika izy tamin’ireo mpifaninana aman-jatony maro avy amin’ny sekoly malaza isan-karazany. Finiavana mandalina no nanampy an’i Radolaza nanatontosa ny volavolan’asa madinika miisa telo tao anatin’ny enimbola faharoa tamin’ny taona lasa teo ihany. Ny sampana fifandraisan-davitra dia nanome loka voalohany ny volavolan’asa iray antsoina hoe “Dynamic spider robot” notontosain’ny vondrona tarihan’i Radolaza. Mankafy sedra i Radolaza, izany no nisarika azy handray anjara amin’ny fifaninanana “First Global Challenge 2020”…
RANDRIANJATOVO Tahiry Manantsiory
Izaho no RANDRIANJATOVO Tahiry Manantsiory antsoina koa hoe Hardi na Tahiry. Teraka tao amin’ny “HOMI” Soavinandriana, Antananarivo ny 04 Novambra 2003. Mianatra ao amin’ny sekoly Masindahy François Xavier Antanimena, kilasy faha 2. Tia milalao “jeu video” sy milalao baolina kitra. Avanana eo amin’ny resaka teknolojia ary nampianatena tamin’ny fikirakirana ny “Arduino” ary nianatra ” Programmation, Scratch “. Ankehitriny dia isan’ireo ekipa malagasy amin’ilay fifaninanana iraisam-pirenena dia ny FGC na “First Global Challenge ” aho. Manana tanjona aho dia ny handresen’ny ekipako ary ho lasa ohatra ho an’ireo zandry ary indrindra ny Malagasy
ANDRIATONGARIVO LALATIANA: “Maodelin’ny « asa sy ezaka » ireo tanora ireo ka mila tohanana”
Ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina no mpiahy ireto ekipa ireto.
Amin’ny maha fifaninanana azy, nisy ny antso fanohanana nataon’ireo tanora ao anatin’ny ekipa nasionalin’ny Robotika, taona 2020. Tanjona ny mba handehanana any amin’ny dingana farany lavitra indrindra, ary ho reharehan’ny Firenena iray manontolo. Namaly izany antso fanohanana izany ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ka nanapa-kevitra ny hiahy sy hanohana manontolo ireto tanora ireto. Araka izany, niantohan’ny minisitera ny toeram-pivondronana, eny amin’ny CEFOM Ivato, izay tantanin’ny Minisitera, mandra-patapitry ny fifaninanana, amin’ny faran’ny volana septambra. Ny minisitera koa no miantoka ny sakafo mandritra izay fotoana izay. Ankoatra izay, nanolotra tosika amin’ny lafiny serasera koa ny minisitera, ary nanolotra ny akanjon’ny ekipa nasionaly, ny fanampiana rehetra amin’ny resaka fitaterana, ary ireo pitsopitsony hafa mbola ilaina amin’ny fifaninanana. Tsy latsa-danja koa ny fanohanana ara-moraly.
Tonga nitsidika ny ekipa nasionaly teny amin’ny CEFOM Maibahoaka Ivato, omaly ny Minisitra Andriatongarivo Lalatiana sy ny mpiara-miasa aminy
Mahavita zavatra ny tanora malagasy
Tonga nitsidika ny ekipa nasionaly teny amin’ny CEFOM Maibahoaka Ivato, omaly ny Minisitra Andriatongarivo Lalatiana sy ny mpiara-miasa aminy. Tamin’izany no nanaovana ny fifankahafantarana eo amin’ny roa tonta, nampahafantaran’ireto tanora ireto an’ilay fifaninanana sy ireo tetikasa entin’izy ireo anaty fifaninanana, nanehoany izy ireo koa ny « robot » vita malagasy entiny mifaninana. Araka ny fanazavan’ny minisitra Andriatongarivo Lalatiana, isan’ny nanosika ny Minisitera hiahy ireto tanora ireto ny fitondran’izy ireo ny fanevam-pirenena izay mendrika ny ho tohanana. « Eo koa ny asa sy ezaka izay soatoavina mila tohanana”, hoy izy. Soatoavina izay ao anaty fandaharanasan’ny minisitera rahateo. Ankoatra izay, maodely ho an’ny tanora malagasy hafa izy ireo. “Rehefa nihaona tamin’izy ireo aho anio dia tena resy lahatra fa mahavita zavatra ny tanora malagasy”, hoy ny minisitra. Fotoana izay nampirisihiny ny ankizy sy ny tanora malagasy ho amin’ny ezaka tahaka izao. Zava-dehibe koa ny fanohanana azy ireo mba hampahafantarana ny atao hoe STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), izay ilaina amin’ny fampandrosoana ho an’ny zandry zanaka mbola mianatra. Fehiny, mila fanohanana ny ekipa nasionaly malagasy.
Niavaka ny fifaninanana tamin’ity taona ity
Fandraisana anjara fahefatra ataon’i Madagasikara ity andiany ity. Ny fikambanana STEM4GOOD no mitarika ireto ekipa ireto. Raha tsiahivina, tany Etazonia no natao ny andiany 2017, tany Meksika kosa, ny 2018, ary tany Dubai ny 2019. Somary niavaka ny fifaninanana tamin’ity taona ity noho ny areti-mandoza misy manerantany. Izany hoe, tsy natao tany amina firenena ny fifaninanana, fa amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao sy ny aterineto, ary misy ny fanamby na « défi » atao isan-kerinandro, izay hifaninanan’ny mpandray anjara rehetra. Tsara ho fantatra fa efa nanomboka ny 27 jona ny fifaninanana ka misy fanamby hifaninanana « défi » isan-kerinandro. Taorian’ny fanamby hifaninanana 18 efa vita, dia mitana ny laharana fahadimy ny ekipa malagasy amin’ny firenena 175. Araka ny fanazavana, Bangladesh no laharana voalohany hatreto amin’ny isa 53. Manaraka azy Syrie eo amin’ny laharana faharoa, Algérie laharana fahatelo 3, ary Madagasikara laharana fahefatra miaraka amin’ny Colombie, Srylanka, Afrika Atsimo, amin’ny isa 48. Hatreto, mbola misy fanamby hifaninanana 7 mandra-pahatapitry ny fifaninanana, amin’ny faran’ny volana septambra.
ANOSIBE NAMONTANA: Mpandeha an-tongotra iray maty voahitsaky ny kamiao
« OPERATION COUP DE POING »: Natomboka ny hetsika fandraofana fako faobe
FAHASALAMANA ARA-PANANAHANA: Nivoaka ny boky torolalana ho an’ny mpitsabo tsotra
DISTRIKAN’I BEALANANA : Nisitraka tohodrano manondraka tanimbary mirefy 1172 ha